आज विश्व एड्स दिवस «
भरतपुर –एचआइभी संक्रमित भइसकेपछि शरीरमा भाइरस फैलिन नदिन नियमित ‘एआरभी’ औषधि सेवन गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य संस्थामा यो औषधि निःशुल्क पाइन्छ । एचआइभी भाइरसले रोगसँग लड्ने क्षमता घटाउने भएकाले अन्य रोगको संक्रमण हुने जोखिम बढ्छ । असुरक्षित यौन सम्पर्क, रगत, संक्रमित आमाबाट जन्मेका बच्चामा एचआइभी सर्ने खतरा बढी हुन्छ ।
पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरुले कोरोनाविरुद्धको ५ हजार खोप उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । हालै नियुक्त
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई तत्काल
तोकिएका उमेर समूहलाई समयमै खोप दिनुपर्: डा. राजभण्डारीसरकारले वैज्ञानिकहरूको समन्वयमा कोरोना खोप नेपालमै उत्पादन गर्नतिर
निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएसँगै सुनसरीमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ ।सुनसरीमा एक साताभित्र एक हजार
नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटलले अब प्रत्येक शनिबार निःशुल्क ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।नर्भिक हस्पिटलका